Taxanaha ugu fiican YG (YGP) matoorrada AC ee miiska rullaluistemadka Soo saaraha iyo Warshadda | Hadal
YG (YGP) taxanaha matoorrada AC ee miiska duubista
Halbeegyada Wax soo Saarka Waxsoosaarka YG taxane saddex waji oo ah matoorro induction AC ah oo loogu talagalay miiska rullaluistemadka YG taxane saddex-waji matoorro ah oo loogu talagalay miiska rullaluistemadka ayaa ah jiilka cusub ee ku saleysan matoorrada taxanaha ah ee JG2. Waxqabadkeeda dhammaystiran ayaa la barbar dhigi karaa alaabooyinka la midka ah ee laga iibiyo caalamka. Waxay leeyihiin astaamo sida soo socota: Cabbirka sii kordhaya ee matoorrada taxanaha YG waxay u hoggaansamaan heerka IEC. Heerka ilaalinta xayndaabku waa IP54. Nooca qaboojinta waa IC410. Matoorrada taxane YG noqon kartaa classifie ...
YG taxanaha saddex waji ee matoorrada induction AC ee miiska duubista
YG taxanaha saddexda waji ee miiska rooga waa jiilka cusub ee ku saleysan matoorrada taxanaha JG2. Waxqabadkeeda dhammaystiran ayaa la barbar dhigi karaa alaabooyinka la midka ah ee laga iibiyo caalamka. Waxay leeyihiin astaamo sida soo socota:
Cabirka sii kordhaya ee matoorrada taxanaha YG waxay u hoggaansamaan heerka IEC. Heerka ilaalinta xayndaabku waa IP54. Nooca qaboojinta waa IC410.
YG matoorrada taxanaha ah waxaa loo kala saari karaa nooca YGa iyo nooca dhamaadka isticmaalka YGb. YGa matoorrada waxaa ku jira istiraatiijiyad xannibaysa oo sarreeya, xayiraadda hooseysa, joogteynta firfircoonaanta sare, dabeecad farsamo jilicsan, iwm waxayna awood u leedahay inay si joogto ah u bilowdo, u jeesato oo ay u rogto howlgalka. Mashiinka YGa waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu quusto miiska miisaska shaqada ee warshadaha qalliinka iyo xaaladaha shaqada ee la midka ah. Matoorrada YGb waxay soo bandhigaan awood sare, waxqabad sare, xawaare ballaaran oo la isku habeyn karo, astaamo farsamo adag, iwm matoorrada waxaa loo adeegsadaa in lagu jajabiyo miiska gudbinta miisaska warshadaha qalliinka iyo xaaladaha shaqada ee la midka ah.
Mashiinka 'YGa motor' waa heerka kala-saaridda H, nooca shaqadana lagu qiimeeyo waa S5, taas oo loo xushay iyadoo la raacayo xaddididda xaddiga iyo firfircoonida joogtada ah ee wareegga waajibaadka weheshadda. FC waxay u taagan tahay wareegga waajibaadka, FC waa 15%, 25%, 40% ama 60%. Awoodda matoorrada YGa ee miiska taariikhda farsamada waxaa loogu talagalay xaalad waajib joogto ah oo keliya tixraac.
YGb matoorku waa fasalka dahaarka leh F iyo nooca waajibaadka la qiimeeyay waa S1, kaas oo lagu xushay xaaladda awoodda dity joogto ah.
YG matoorrada taxanaha ah waxaa lagu hagaajin karaa inverter. YGa matoorrada waxaa lagu hagaajin karaa 20 illaa 80 Hz iyo YGb matoorrada waa la hagaajin karaa 5 illaa 80 Hz fadlan la xiriir waaxdayada farsamada haddii aad u baahan tahay taariikh kale oo ka duwan miiska taariikhda farsamada.
Taxane YGP seddex waji oo ah matoorro induction AC ah oo ay wadaan inverter miiska gawaarida
YGP matoorrada taxanaha ah ee ay ku shaqeynayaan qalabka wax lagu beddelo miiska waxay ku saleysan yihiin matoorrada taxanaha YG si ay u ballaadhiyaan xawaaraha xawaaraha lagu hagaajin karo ee weynaanta ballaadhinta iyo awoodda kala duwan. Waxaa loogu talagalay in lagu korsado qalabka wax lagu beddelo si loo wado miiska gawaarida ee warshadaha qalliinka, xawaare ballaaran oo la isku habeyn karo, sidaa darteed matoorrada waxaa loo isticmaali karaa oo keliya miiska gawaarida oo leh hawlgal joogto ah, laakiin sidoo kale miiska rullaluistemadka oo leh bilowga soo noqnoqda, bareega, dib u celinta qalliinka .
Cabbirka guud ee matoorrada taxanaha YG waxay ka socdaan H112 illaa H225. Xuddunta wax soo saarkeedu waa 8 illaa 240 Nm oo inta jeer ee ay soo noqnoqonaysaa waa 5 illaa 80 Hz. Laakiin cabirka guud ee matoorrada taxanaha YGP waxay ka socdaan H112 illaa H400, oo mashiinka wax-soo-saarkiisa wuxuu ka socdaa 7 Nm illaa 2400 Nm, iyo inta jeer ee la jaray waa 1 illaa 100Hz. Mashiinka taxanaha YGP wuxuu ku wadi karaa miiska duubista leh tiknoolaji weyn iyo xawaare hooseeya.
Danab lagu qiimeeyay: 380V, inta jeer ee la qiimeeyay: 50Hz. Ku shub danab gaar ah iyo soo noqnoqosho, sida 380V, 15Hz, 660V, 20Hz, iwm oo ku saabsan codsiga macaamiisha.
Heerka soo noqnoqoshada: 1 illaa 100 Hz. Xuddunta joogtada ah waxay ka timaadaa 1 illaa 50 Hz oo awoodda joogtada ahi waa 50 illaa 100 Hz. Ama beddel soo noqnoqodka la codsaday markii la codsado.
Nooca shaqada: S1 illaa S9. S1 miiska taariikhda farsamada waa tixraac kaliya.
Fasalka daboolka waa H. heerka ilaalinta xayndaabku waa IP54, sidoo kale waxaa laga samayn karaa IP55, IP56, iyo IP65. Nooca qaboojinta waa IC 410 (dabeecadda dusha sare).
Meesha sanduuqa terminal: sanduuqa terminalku wuxuu ku yaal dhinaca bidix ee matoorrada, cabirkiisuna wuxuu ka socdaa H112 ilaa H225 oo laga fiirinayo dhamaadka wadista, wuxuuna ku yaalaa dusha sare ee matoorrada, cabirkooduna yahay H250 ilaa H400 oo laga fiiriyey dhamaadka
Hore: Y YE2 YE3 taxane warshad saddex waji ah matoorro induction AC ah
Xiga: YP (YPG) taxanaha AC matoorrada ay wadaan inverter
YZ (YZP) taxanaha AC matoorrada biraha iyo wiishka
YP (YPG) taxanaha AC matoorrada ay wadaan inverter
Y YE2 YE3 taxane warshadaha saddex waji AC indu ...